Healthy Life - Mero Khabar -
नेपालीहरुलाई चिनाउने रोगको रुपमा ग्याष्टिक रोग परिचित छ। नेपाली नागरिकता नै ग्याष्टिक रोग भए नभएको अनुसार दिनुपर्छ भनेर ठट्टा गरेर भन्ने गरेको पनि पाइन्छ। आज म यहि ग्याष्टिक रोगको बारेमा वृस्तितमा कुरा गर्न गइरहेको छु। ग्याष्टिक रोग भनेको के हो? मेडिकल भाषामा ग्यास्ट्राइटिस (Gastritis) भनेर चिनिने यो रोगलाई साधारण बोलीचालीको भाषामा ग्याष्टिक वा ग्याष्ट्रिक भनिन्छ। यो रोगमा पेटको माथिल्लो भाग पोल्ने, दुख्ने, वान्ता होला जस्तो हुने, खाना अरुची हुने, पेट ढुस्स फुलेको, भरिएको जस्तो लाग्ने हुन्छ। धेरै बढेको बेलामा खप्नै नसक्ने गरेर पेट दुख्ने, कालो दिसा...
जीवनमा कहिल्यै पनि ढाड नदुखेको मानिस प्रायः कमै हुन्छन् । केही नभएको व्यक्तिलाई पनि एक्कासि निहुरिँदा वा केही काम गर्दा चसक्क भए जस्तो हुने र त्यसपछि ढाडको दुखाइ सुरु हुन्छ । प्राय : ढाड दुख्ने व्यक्तिहरू सुरुको अनुभव यसरी नै सुनाउँछन् । हाम्रो जीवनशैली, उठाइ, बसाइको तरिका, कम्प्युटर चलाइ, शरीरको तौल आदि विभिन्न कारणले ढाड दुखाइमा असर पार्छ । एक्कासि ढाडको दुखाइबाट पीडित भइसकेपछि त्यो दुखाइ कहिल्यै पनि बिर्सिन सकिँंदैन । ढाडको दुखाइ एक्कासिमात्रै हुँदैन, लामो समयसम्म बिस्तारै पनि हुन्छ । यसरी अलिअलि दुख्ने ढाड दुखाइले हामीलाई पछि हुनसक्ने कठोर दुखाइको...
-दुइ सय पचास मिलि लिटर तोरीको तेल रपचास ग्राम मेहेन्दीको हरियो पत्ता लिनुहोस्। -तेलमा पत्ता राखी राम्ररी उमाल्नुहोस्। -यसलाई सेलाउन दिनुहोस् र छानी दिनदिनै कपालमा मालिस गर्नुहोस्। -यसलाई नियमित प्रयोग गर्नुहोस्,केही दिनमा कपाल झर्न कम हुदै सकारात्मक नतिजा पाउनु हुनेछ। ...
कब्जियतको औषधि अदुवा
कब्जियतको समस्या भएकाहरुकालागि अदुवा अचुक औषधि हो ।अदुवाको सानो सानो टुक्रामा नुन छर्केर खादा कब्जियत निको हुन्छ । विशेष गरेर खाना खाइसकेपछि अदुवा खानु राम्रो मानिन्छ । अदुवाले मानिसको पाचनशक्ति बढाउछ । अदुवामा खाना पचाउने तत्व हुन्छ । मानिसलाई लाग्ने रोगहरुमध्ये आधा जति रोगहरु पानीका कारणले हुन्छन खाना राम्ररी पचेन भने टाउँंको दुख्ने, खान मन नलाग्ने, दिसा सफा नहुने, काम गर्न मन नलाग्ने जस्ता रोगहरु देखिन्छन । यी रोगहरुको कारक तत्व पेटको कब्जियत हो । चिकित्सकहरुका अनुसार अदुवाको नियमित सेवनसँंगै पानी पनि प्रसस्त पिउनु पर्छ । एक व्यक्तिले दैनिक चार लिटर...
हेपाटाइटिसबाट बच्ने उपाय
काठमाडौ, श्रावण १२ - जुलाई २८ हेपाटाइटिस दिवस । विश्वभर ४१ करोड मानिस दीर्घकालीन रूपमा हेपाटाइटिस ‘बी’ र ‘सी’को संक्रमणसँगै बाँचिरहेका छन् । यसैका कारण हरेक दिन विश्वभर ४ हजार मानिसको ज्यान जाने गर्छ । नेपालमा पनि करिब साढे ४ लाख मानिस हेपाटाइटिस ‘बी’ र ‘सी’बाट संक्रमित छन् । धेरैलाई आफू यो रोगबाट संक्रमित भएको मेसो पनि छैन । कालान्तरमा गएर यीमध्ये केही कलेजोको सिरोसिस तथा क्यान्सरको सिकार हुनसक्छन् । यसैगरी दूषित पानीबाट सर्ने हेपाटाइटिस ‘ई’बाट समय—समयमा जन्डिसको महामारी फैलने गर्छ । गतवर्ष पनि विराटनगरमा करिब ८ हजारजना मानिस हेपाटाइटिस...
किड्नीमा भएको पत्थरीलाई प्राक्रितिक उपचार पद्धतीद्धारा एक हप्तामै बाहिर ल्याउन सकिन्छ, तर कसरी ? आज हामी किड्नीमा जम्मा भएको पत्थरीलाई प्राक्रितिक उपचार पद्धती अपनाएर पूर्ण रुपले सफाया पार्न सकिने बिधिका बारेमा जानकारी गराउँदै छौं । तर यदि किडनीको पत्थरी ठूलो छ भने सावधानी अपनाउनु पर्छ किनकि त्यस्ता ठूला पत्थरीबाट छुटकारा पाउने बेलामा केही अप्ठ्यारो पनि हुन सक्छ । आज हामीले जानकारी गराउन लागेको यो घरेलु प्राक्रितिक ओखतीले तपाईको किडनीमा भएको पत्थरीलाई प्राक्रितिक रुपले एक हप्तामै बिदा गर्ने छ । यसले किडनीमा जम्मा भएको बालुवा तथा अनावश्यक थुप्रोलाई पनि...
हरेका प्रकारका तरकारीहरुमा बिभिन्न किसिमका औषधिय गुण पाइन्छन् । मौसमअनुसार तरकारीलाई सन्तुलन मात्रामा खान सकेमा रोगको सम्भावना निकै कम हुन्छ । गाढा पहेलो र हरिया तरकारीमा प्रशस्त मात्रामा क्यारोटिन पाइन्छ । क्यारोटि भिटामिन एको प्रारम्भिक स्वरुप हो । क्यारोटिन शरिर भित्र गएर भिटामिन एमा परिणत हुन्छ । साधारणतया तरकारीमा कार्बोहाइड्रटमध्ये माड र सेलुलोज, खनिज पदार्थमा आइरन र क्याल्सियम र भिटामिन ए, बी र सी प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । तरकारीमा कोलेरेस्टोल भने हुदैन । तरकारीमा फाइबरको अधिक हुन्छ । विभिन्न तरकारीका गुणहरु निम्न अनुसार छन् : ...
मेरोखबर सम्बाददाता दिसा गर्दा रगत आउँछ, मासु पलाएको छ, दुख्छ, फाटेको, फुलेको या सुन्निएको छ, मलद्वार चिलाउँछ लगायतका समस्या आम मानिसमा सुनिन्छ । कसैको त पीप बग्छ, अंगुरका झुप्पाजस्तो पलाएको छ, रातो डल्लो छ भन्ने सुनिन्छ । यही रोग नै पायल्स हो । कसैलाई यो रोग लाग्दा रगत आउछ भने कसैलाई आउदैन । पायल्स हुनुको कारण पायल्स हुनुको मुख्य कारण खानपान र जीवनशैली नै हो । पानी कम खाने, हरियो सागपात नखाने, शारीरिक व्यायाम कम गर्ने, धेरै व्रत बस्ने, चिया बढी पिउने, माछामासु तथा सुख्खा चीज जस्तै चाउचाउ, बिस्कुट, चाउमिन बढी खाने, अनियमित खानपान, अनिद्रा, धेरै तनाव लिने, रक्सी, चुरोट,...
लसुन : चिज एक फाइदा अनेक
लसुन हरेक प्रकारको भोजनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तपाईं सोच्न पनि सक्नु हुन्न कि एउटा लसुनले शरिर भित्र पैदा हुने अनेकौँ रोगहरुलाई नाश गर्ने गर्दछ । यो धेरै प्रकारको रोकथाम तथा उपचारमा प्रभावकारी हुन्छ । जब तपाईं केहि खानुभन्दा पहिले लसुन खानुहुन्छ भने यसले तपाईंको ताकत बढाउने गर्दछ । यसकारण यो एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक एन्टीबायोटिक हाे । बिहान खाली पेटमा लसुन खानु किन प्रभावकारी मानिन्छ ? यसले ब्याक्टेरिया ओभरएक्सपोज्ड हुने गर्दछ र लसुनको शक्तिले यस्ता ब्याक्टेरियाहरु आफ्नो रक्षा गर्न सक्दैनन् । यसबाट हुने स्वास्थ्य लाभको सूची कहिले पनि खत्तम हुँदैन । १....
कोरियामा शनिबार मर्सको बिरामी भेटिएन
सोल, ५ असार । दक्षिण कोरियामा मिडल इस्ट रेस्पिरेटोरी सिन्ड्रोम (मर्स) नामको भाइरसको सङ्क्रमण घटेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । दक्षिण कोरियाका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले शनिबार यसका सङ्क्रमित नभेटिएको जनाएका छन् । यो सङ्क्रमणका बिरामीको सङ्ख्या १७० पुगेको बताइएको छ । यस रोगका विरुद्ध दक्षिण कोरियाले सुरु गरेको लडाइका क्रममा यसमाथि विजय हासिल गरेको हो त भनेर यसलाई लिइएको छ । १६ दिनअघिदेखि दक्षिण कोरियाको सरकारले यसका विरुद्धमा स्वास्थ्य विशेष स्वास्थ्य उपचार सुरु गरेको हो । सोह्र दिनपछि पहिलो पटक यसको सङ्क्रमणबाट कुनै विरामी अस्पताल नआएका स्वास्थ्य ...